FVB Shopu Yegirazi - Dhizaini magazini
Shopu Yegirazi Iyo yegirazi shopu inoedza kugadzira imwe yakasarudzika nzvimbo. nekushandisa zvakanaka mesh yakawedzera nehukuru hwakasiyana hwemakomba kuburikidza nekudzokororazve uye kuisa uye kuishandisa kubva kumadziro ekushongedza kumukati wedenga, chimiro che concave lens chinoratidzwa- mhedzisiro dzakasiyana dzekujeka uye hunhu. Nekushandisa kwe concave lens neakona dzakasiyana-siyana, dzakakombama uye dzakateedzeredzwa mhedzisiro yemifananidzo inoiswa pachigadziko dhizaini uye inoratidza kabinetry. Iyo nzvimbo yeiyo convex lens, iyo inoshandura saizi yezvinhu panguva yekuda, inoratidzwa pamadziro ekuratidzira.
Zita rechirongwa : FVB, Vagadziri zita : kailun huang, Izita remutengi : iiiudesign.
Shopu Yegirazi kailun huang FVB